Qaxooti loo tarxiileyo Afgaanistaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dayuurad ka kacday garoonka dayuurradaha ee Arlanda. sawir: Lars Pehrson/SvD/TT
Qaxooti loo tarxiileyo Afgaanistaan
Mustafa: Waxaa la ii tarxiilin in la i dilo
La cusbooneeyay tisdag 10 oktober 2017 kl 11.32
La daabacay tisdag 10 oktober 2017 kl 10.03
Garoonka dayuurradaha ee Landvetter ayay caawa ka duuli doontaa dayuurad sidda ugu yaraan 10 ka mid ah dhallin-yarada dalka keli-nimada ku timid ee dib loogu tarxiili doono magaalada Kaabuul ee dalka Afgaanistaan.
Khamiistii ina dhaaftay ayay ahayd kolkii ugu dambeeysay ee uu ururka u dooda xuquuqda bani’aadamka Amnesty international uu soo saaray war-bixin uu ku sheegay waxyaabo ey ka mid yihiin in falalka tarxiilka ee dalka Afgaanistaan jebineyaan xeerarka caalamiga, sidaa daraadeed loo baahan yahay in markaba la joojiyo. Middaasina oo ey ugu wacan tahay ammaan-darrada dalkaa ka jirta.
Wiil ay da’diisu tahay 19 jir ayaa ku sugan goobaha xabisyada ee hayadda socdaalka ee Kållered. Wuxuu dalka ku yimid 15 jir sannadkii 2013. Muddadii uu dalka joogay ayuu ku guuleeystay inuu qoys helo, iskuul bilaabo, afka barto, uu gabar saaxiib ah yeesho. Hase yeeshee caawa fiidkii ayaa dib loogu tarxiili doonaa dalka Afgaanistaan.
–Ma garan karo inaan noolaan doono toddobaadyo dabadood, sida uu sheegay.
"Hayadda socdaalka ayaa aamin-san in xaaladda dalka Afgaanistaan ay tahay halis, hase yeeshee ey kala duwan yihiin gobollada qudhoodu. Khilaafka ka aloosan dalkaa ayaan gaarsiisneyn heerka xeerka iyo dhabba tuska u degsan hayadda socdaalka ee dhammaan dadyoowga Afgaanistaan ka soo jeeda lagu siiyo ama siin karo magan-gelyo".